Windows Vista Undelete: Sida loo Undelete Files in Windows Vista
> Resource > Windows > Windows Vista Undelete: Sida loo Undelete Files in Windows Vista
Can I Undelete Windows Vista Files?
Editor Gacaliye, waan tirtiray qaar ka mid ah sawirrada qoyska muhiim ah ka Recycle Bin on my computer Windows Vista. Waxaan u baahanahay inaan iyaga undelete. Maxaa samayn karaa? Fadlan kula talinayaa!
Marka files waa laga saaray Windows Vista Recycle Bin, ay weli ka jiraan ku wadid aad computer ee adag. The files tirtiray waxaa lagu calaamadeeyay xogta sida geli karin nidaamka isla markaana aan la weligiis la waayay ilaa iyo inta ay ma overwritten by xog cusub. Sidaas suurto gal ah iyaga aad undelete kartaa haddii aad nasiib.
Wondershare Data Recovery waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee barnaamijyada undelete Windows Vista aad ka heli karto si undeleted xogta Windows Vista. Tani waxay awood leh Windows Vista qalab undelete aad u saamaxaaya in ay ka bogsanayaan oo dhan cayn kasta oo files tirtiray ka Windows Vista computer, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files audio, waraaqaha, iwm Plus, barnaamijka si buuxda u la jaan qaada Windows XP, Windows 8 iyo Windows 7.
Download version maxkamadda si undelete xogta Windows Vista hadda.
Qabtaan Windows Vista Undelete in 3 Talaabooyinka
Wax First hore, ilaa iyo inta xogta waa la tirtiraa your computer Windows Vista, waxaad jeclaan stop fiican gelinaya macluumaadka cusub si ay xijaab asalka / degdeg ah la wado. Ka sokow, fadlan dajiyo barnaamij ku saabsan drives kale / qoruhu on your computer.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabasho in undelete files Windows Vista
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery barnaamijka on your computer Windows Vista, waxaad ka arki kartaa suuqa kala barnaamijka sida hoos.
Si undelete files ka computer Windows Vista, fadlan dooro "lumay Recovery File" mode si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 xijaab Scan / drive on your computer Windows Vista
Markaas barnaamijka ku tusi doonaa maqaal qoruhu / drives on your computer. Waxaad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah aad ku socoto in undelete files ka oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka files tirtiray waxa on.
Talaabada 3 files Undelete in Windows Vista
Marka iskaanka la dhammeeyo, files on xijaab / wadid aad Windows Vista computer ayaa helay lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ka arki kartaa nooca file ama jidka si aad u hubiso sida badan oo files tirtiray la undeleted karaa your computer Windows Vista.
Ka dib hubinta faylasha aad rabto in aad undelete, waxaad la Calaameeyey karo oo guji "Ladnaansho" button iyaga badbaadiya, si aad u computer Windows Vista.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii faylasha undeleted dib ugu xijaab / drive asalka si looga fogaado in xogta overwritten.
Recovery ah Barzakh, USB: Sidee inuu ka soo kabsado ah Barzakh, USB
Sida loo dayactir Error SD Card Aan formatted
Top 8 Screen toogtay Apps for Windows Phone
15 Talooyin inuu dad idinka dhigto Master of Windows 10
5 lagu bedelan karo Windows Movie Kan sameeyey,
Taariikhda / Waqtiga ee Windows Movie Kan sameeyey,
Sida loo Guba Windows Movie Kan sameeyey Project in DVD
Boot Up burburtay Computer la Windows 7 Boot digsi